Facebook Virus - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
အခုတလော Facebook မှာ Virus တွေ ပြန့်နေပါတယ်။ 2010 April ကနေ စပြီး Ramit ဆိုတဲ့ malware တစ်ကောင် ပြန့်နေတာ အခုတလော သိသိသာသာ ဆိုးလာပါတယ်။ Facebook account ပေါင်း 45,000 ကျော်ရဲ့ Log In password တွေ ခိုးယူသွားပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
Virus ၀င်သွားတဲ့ Account တွေက Facebook Wall, Groups, Page တွေမှာ အလိုလို post တင်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်း Video ကို ဒီမှာ ကြည့်ဆိုပြီး လည်ကောင်း၊ Timeline ဖြုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ လင့်တွေကို လည်ကောင်း အလိုလို တင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ စိတ်ဝင်စားလို့ click လုပ်ကြည့်လိုက်ရင် Virus ရှိတဲ့ Page တစ်ခုကို ရောက်သွားပါတယ်။ တချို့ page တွေက Youtube ပုံစံ၊ Facebook ပုံစံ လုပ်ထားပါတယ်။ အဲဒီ Page မှာ Video ကြည့်ဖို့ ... ဒါလေးကို တချက် click လုပ်ဖို့ လိုတယ်၊ install လုပ်ဖို့ လိုတယ်ဆိုပြီး ဆိုလာပါတယ်။ အဲဒါကို click လုပ်လိုက်မိပါက စက်ထဲကို virus install သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ (ကျွန်တော် linux နဲ့ စမ်းတာတော့ browsers ထဲကို install လုပ်တာတွေ့ပါတယ်။ Linux ကိုလဲ ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါတယ်)
စက်ထဲ Virus ရောက်သွားက Windows မှာ Registry ကို ၀င်ပြင်ပြီး startup မှာ အလိုလို တက်စေပါတယ်။ နောက် ကိုယ့် network, browsing activity စတာတွေကို control လုပ်လိုက်တယ် ဆိုပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ accounts ကိုလဲ လင့်ပေးပြီး ဖြန့်ပါတယ်။ Sep-Dec, 2011 ထိ Windows PC 800,000 လောက် infected ဖြစ်နေတယ် ဆိုပါတယ်။
လူအများစုက email, facebook စတာတွေမှာ password တစ်မျိုးထဲ သုံးကြတဲ့အတွက် facebook password ရတာနဲ့ Gmail, Bank password ရသွားသလိုလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Virus မ၀င်အောင် Facebook wall, groups, pages တွေမှာ shortend URLs နဲ့ တင်ထားတဲ့ posts တွေကို သွားမနှိပ်ပါနဲ့။ Shortened urls ဆိုတာ bit.ly, is.gd, tinyurl.com, goo.gl စသဖြင့် website လိပ်စာ အတိုလေးတွေကို ပြောတာပါ။ အဲဒီလိပ်စာတွေ နောက်ကွယ်မှာ ဘာတွေ ရှိမှန်း အလွယ်တကူ မသိနိုင်ပါ။ ပြန်ပြီး လိပ်စာရှည် ဖြစ်အောင် လုပ်လို့ ရပေမဲ့ ထွက်လာတဲ့ လိပ်စာက http://facebook2011.blogspot.com တို့လိုမျိုး ဖြစ်နေသေးတဲ့ အတွက် စိတ်ချပြီး နှိပ်လိုက်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။
ကိုယ်မှားမိလိုက်၊ စပ်စုမိလိုက်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ကွန်ပျူတာ သုံးတဲ့သူများပါ ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက် သတိနဲ့ Shortened URLs များ မနှိပ်ကြရန် တိုက်တွန်းပါတယ်။ ပို့စ်တင်သူများလဲ shortened urls များ ဖြစ်နိုင်ရင် မသုံးတာ ကောင်းပါတယ်။
Last edited by g00gle; 12-01-2012 at 02:54 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 16 ဦးတို့မှ g00gle အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလင်း1z, ချမ်းမင်း၈၁, ဇာနည်စိုး, ရခိုင်သားလေး, လီယိုနာဒို, ဦးသာကြီး, မောင်ပေါ်ဦး, နိုးတူး, AZM, bagothar85, htun30, pannuko, PyaitSone, tu tu, ZAW KAUNG LAY, zo
ပြန်စာ - Facebook Virus
ဘာပဲဖွင့်ဖွင့်ကိုယ်ဖွင့်တဲ့ ဆိုဒ်ကိုအရင်သွားပြီးခဏကြာတော့သူ့ဆီကိုရောက်သွားပါတယ်..ရှိတဲ့ Antivirus တွေလဲကိုက်တယ်တော့ပြောတယ်မရှင်းနိုင်ဘူးပြောပါတယ်..firefox ကိုဖြတ်ပြီး
အောက်ပါအသင်းဝင် 12 ဦးတို့မှ ကျော်တိုး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလင်း1z, ဇာနည်စိုး, ဦးသာကြီး, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်ဗလ, bagothar85, g00gle, htun30, pannuko, thetzin, tu tu, ZAW KAUNG LAY
အခုတလော ဘင်္ဂလားက လူတွေ ဖေ့ဘွတ်မှာ scam links တွေ လိုက်တင်နေတာ တွေ့တယ်။ goo.gl လို့လို shortened လုပ်ထားတဲ့ url ကို မဖွင့်တာ ကောင်းပါတယ်။ ဖွင့်မိလို့ တခြား website ကို ရောက်ရင်လဲ ဘာမှကို မနှိပ်ပဲ Ctrl + Shift + Escape နှိပ်ပြီး Task Manager ကို ဖွင့်။ Chrome.exe / Firefox.exe စတဲ့ဖြင့် browser ကို End Process လုပ်ပလိုက်ပါ။ Hack ထားတယ်ဆိုတဲ့ ဆိုက်တွေလဲ မကြည့်တာ ကောင်းပါတယ်။
soccer myanmar page က link တစ်ခုမှာ virus အကြောင်း ရေးထားလို့ ဒီမှာ ပြန်ကူးလိုက်ပါတယ်။ virus remove အတွက်ကလွဲပြီး ဒီထဲမှာ ပါတဲ့ လင့်တွေလဲ မနှိပ်လိုက်ပါနဲ့။
File size:2097152 bytes
Filetype:PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly
File URL: http://goo.gl/Ht [file is deleted - due to Suspend Hosting- Thank you Mike from GoDady who taking care this :)]
This is script kiddie who uses the program to generate the worm:
These are his contact numbers to recover the password.... Any authority can contact these numbers for cyber criminal:
First of all, THERE IS NO INFECTED AT ALL IN BURMA with that worm. You want to name "NAKA", we can name it "BSGH" - "Bangalishit Script-kiddie Got Hacked".
They think, Burmese people use PC like poor BD guys use. We use Mac and Linux!! Go and develop yourself to writeavirus for Linux if you got skills, but we got skill in disassembly too.
The worm modifies the IPs in Host file for Facebook, Google IP addresses to redirect to their website. If someone visit the Facebook with infected PC, they may think, this guy hacked Facebook, Real idiots! They don't know how Burmese people surf the web, everyone know host files, and everyone know how to bypass the big firewall of Government of Burma.
66.220.153.74 http://bdblackhats.com <=== To replace with Facebook
73.194.69.104 http://bdblackhats.com <=== To replace with Google
If you see in your host file, please kill these two lines.
2) Fake Msg : "This program has known Compaitablity Issues In VirturalBox. Please Run It Normally. The Application Will Now Close. Thankyou."
Fake Msg : "This program has known Compaitablity Issues In VirturalBox. Please Run It Normally. The Application Will Now Close. Thankyou." for SpyBot S&D
Logger Email Address: torechudikhankirpola@gmail.com Password: +8801015209
Now we deleted their email, that account is created for malicious purposed only to get log from Burmese PC. We have report Google about this account not to accept the recovery request since we have proof.
You can look at following URL:
2#OWNED http://i45.tinypic.com/20js0vb.gif <== After I saw one activity to recover the password, really your confirmation code in my phone. LOL! So I am ready to do this.
3#TANGODOWN http://i49.tinypic.com/35d8g9h.gif <=== Ouch! That may hurt to BD guys!
It has AntiNorman, AntiNOD32, AntiZoneAlarm, AntiBitDefender, AntiKaspers, AntiWireShark. So those anvirus can’t detect it. Avast, AVG, BitDefender, ClamAV, F-Secure, G-Data, Kaspersky, Panda, Quick Heal, VBA32, VirusBuster will not detect this.
Don’t worry, the worm “Generic.dx!” CAN BE detect with following antiviris : AntiVir, CPSecure, Dr.Web, Emsisoft, ESET, F-PORT, IKARUS, SOPHAS.
You can find exe files (NakaNaka.exe, Naka.exe) in infected system.
Dll files are used: ntdll.dll , advapi2.dll, kernel32.dll for running the worm.
Batch file : MELT.bat, the batch file has command to delete C:\_Windows\_winlogon.exe.
Once you run the file, it may infect your pc to log and send email to that email and disable some functions such as Run, CMD.exe and Task Managers. And it kills the some tasklists by following command, the worm, it runs "SC stop wscsvc", "SC stop SharedAccess" and run command “TASKKILL /F /T /IM in order to infect.
For "RUN" problem please visit at http://technet.microsoft.com/en-us/l.../cc938270.aspx
For Task Manager Problem please visit at http://support.microsoft.com/kb/555480,
For CMD.exe problem, please do following system:
And they worm will hide their files in hidden. Because the worm executed to change register key to be 1.
[1 is Hidden,2is Visible]
LOL, i don't know why this URL is used for http://automation.whatismyip.com/, that URL is already block for long time ago from whatismyip.com.
The worm has abilities to spam at Yahoo, Live and Skype with fake message and file.
You may need to clean following files too.
C:\_Documents and Settings\_Username\_Local Settings\_Application Data\_Yahoo Messenger\_y.src
Y.src is for Yahoo Messenger sharable file to spread at your chat.
C:\_Documents and Settings\_Username\_Local Settings\_ Application\_Data\_Microsoft Messager\_mypornpics.src
mypornpics.src sharable file to spread at your chat at Live/Hotmail Chat.
C:\_Windows\_System32\_sy4c.vbs - SKYPE4COM – SKYPE
If your computer is infected, your account may send to your friend with this message:” Hey Check out my new program” At Skype.
You may need to check your Registery at following:
NoControlPanel <=== remove it
Universalwashere <==== If you see account your account password is changed, try this password, if you see new account in your system with that name, that is the password/username. Please remove/change it.
Last edited by g00gle; 21-06-2012 at 08:03 AM..
ချမ်းမင်း၈၁, ဇာနည်စိုး, မျိုးဟန်ထက်, bagothar85, pannuko, tu tu, ZAW KAUNG LAY, zo
Facebook Virus ကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲ အေးမင်းမောင် Virus & Anti-virus ပိုင်းဆိုင်ရာ030-07-2011 03:54 PM